Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Guam na-enye Guåhan Trolley Ọrụ na Tumon n'efu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Guam • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
N'ịgbalị ịga n'ihu na mmaliteghachi ụlọ ọrụ nke mbụ Guam, Guam Visitors Bureau (GVB) na -enye ndị bi n'agwaetiti na ndị ọbịa na Tumon ọrụ ịnya ụgbọ ala n'efu site na July 30 ruo Ọgọst 30, 2021.
Ụlọ ọrụ ndị ọbịa Guam na -anabata ndị ọbịa ịlaghachi wee merie ọrịa ọjọọ.
A na -enye ọrụ Trolley efu na mmekorita ya na njem nlegharị anya Lam Lam.
Ụgbọ ala ahụ ga -enyere ndị ọbịa yana ndị obodo na ndị agha aka ịgagharị agwaetiti ahụ ma kwado azụmahịa mpaghara.
Onye isi GVB Carl TC Gutierrez kwuru, "Anyị chọrọ ịkụnye ntụkwasị obi maka azụmaahịa ịmalitegharị ka anyị na-amalite ịnabata ndị ọbịa wee merie ọrịa a." “Mmekọrịta na njegharị Lam Lam iji nye njem a n'efu ga -enye ndị obodo anyị, ndị agha na ndị ọbịa ịga gburugburu agwaetiti ahụ ma kwado obodo azụmahịa anyị. ”
Ọrụ Guahån Trolley (GTS) dị Guam a na -enye kwa ụbọchị site n'elekere 9:30 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke mgbede n'etiti GPO na Micronesia Mall nwere ọtụtụ nkwụsị n'ime Tumon.
Ụzọ na usoro GTS